Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar : /bins/ohabolana/boka.mg.n
Proverbe Alao izay ho anao : boka sa tandomerina. [Veyrières 1913 #835]
Proverbe Aza manao toy ny boka manjono, ka mifamitaka samy malama. [Cousins 1871 #523]
Proverbe Boka Ikala tsy leon' Ikoto, ary boka Ikoto tsy leon' Ikala. [Rinara 1974]
Proverbe Boka lavon' antsoro : any an-dohasaha vao mifanatrika. [Veyrières 1913 #1953, Cousins 1871 #779]
Proverbe Boka mangala--boatavo : any an-kandemponana vao mifampiandry. [Rinara 1974 #912]
Proverbe Boka manonton-tsoka ka mandrenesa ry izy ato anatiny ato. [Rinara 1974 #913]
Proverbe Boka mararin' ny nendra, ka mafimafy kokoa noho ny teo. [Veyrières 1913 #1959, Cousins 1871 #784]
Proverbe Boka mievina : afa-drofy anio, fa mivindina rahampitso. [Veyrières 1913 #1963, Cousins 1871 #789]
Proverbe Boka mihalotra : manosika azy hody. [Cousins 1871 #790]
Proverbe Boka misambo-balala: mamotsitra ny taovany. [Veyrières 1913 #1972, Cousins 1871 #795]
Proverbe Boka misy mpisaotra : tao ihany, fa navoakany. [Veyrières 1913 #1367, Cousins 1871]
Proverbe Boka mitohy rofia ka manasaritaka ny efa milamina. [Houlder 1895 #2015, Rinara 1974 #925]
Proverbe Boka nempahina ka na sitrana aza narahin-kolatra ihany. [Rinara 1974 #940]
Proverbe Boka nievina ka afa-drofy am-pirariana fa nivindina ihany. [Rinara 1974 #941]
Proverbe Boka tsy enin-tsotro ka rabaho samy tsy hanana. [Rinara 1974 #949]
Proverbe Boka tsy mba mihanta. [Veyrières 1913 #1994, Rinara 1974 #950, Cousins 1871 #819]
Proverbe Izay mikasika io ilay boka. [Veyrières 1913 #2003]
Proverbe Toy ny tandomobe sarisarim-boka. [Veyrières 1913 #2027, Cousins 1871 #3229]
Proverbe Tolom-boka, ka masoandro no fetra. [Rinara 1974 #4166]
Proverbe Tonta boka. [Veyrières 1913 #2025]
Proverbe Tsy hata lavadavaka, ohatra ny boka misikidy rantsana. [Cousins 1871]